Inona no ataoko raha tsy misy ronono ho an'ny saka ny saka? | Noti saka
Tsy manana ronono ho an'ny saka ny saka ko, inona no hataoko?
Monica sanchez | | Fiompiana saka, curiosities
Ny fijerena ny famonoana zanak'alika dia traikefa nahafinaritra, nefa indraindray mety hipoitra ny olana. Ary izany dia, na dia tsy mahazatra aza, ny saka dia mety tsy manana ronono hamelomana ny zanany kely, ka mametraka tsy ampoizina ny ain'izy ireo.
Saingy soa ihany fa raha nanam-bintana niaraka tamin'ny olombelona tsara izy ireo dia tsy hanana ahiahy: na ny reny na ny zanany. Ka raha misalasala ianao, Avy eo izahay dia hamaly ny fanontanianao momba ny saka tsy manana ronono ho an'ny saka, inona no hataoko?
1 Fa maninona no tsy misy ronono ny saka?
2 Inona no hatao raha tsy misy ronono ny saka ko?
Fa maninona no tsy misy ronono ny saka?
Betsaka ny antony mahatonga ny saka efa avy niteraka, na rehefa afaka andro vitsivitsy, dia tsy manana ronono ho an'ny zanany kely. Tsy hoe zavatra matotra izany, izany hoe, tsy tandindomin-doza ny volom-borona amin'ny voalohany, fa ilaina ny mijery ireo zanany vavy, ary koa, fantaro ny antony nitrangan'izany:
Sambany ianao bevohoka- Amin'ny maha olom-baovao anao, mety tsy vonona 100% ny vatanao. Raha tsy tsara ny saka dia tsy misy tokony atahorana, fa ny fitsidihana mpitsabo dia tsy mankarary.
Efa nanan-janaka tsy ho ela: Ary na eo aza ny fahamatorana ara-nofo dia mahatratra eo anelanelan'ny 6 sy 10 volana amin'ny fiainana antonony, mety ho izany no nahatratrarany azy 5 na 4 volana aza (tsia, aza atao adala aho: ny saka iray misy efatra ary iray volana sy tapany dia efa nanana hafanana, ary tsy maintsy natsipintsika izy tamin'io taona io ihany). Ary mazava ho azy, raha mafana izy dia afaka manana alika kely, nefa mandritra ny 4 na 5 volana dia ahiana hisy ny fahasarotana mety hitranga satria mbola tsy nahavita nitombo izy.
Olana ara-pahasalamana: Raha marary ianao, ary / na raha manana mastitis (fivontosan'ny mammary mivonto) ianao dia mety hanana olana amin'ny famokarana ronono.
Sakafo ratsy: Raha nomena sakafo ambany kalitao ianao, ara-dalàna ny fisian'ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra. Mba hisorohana an'io dia tsy maintsy omenao sakafo faran'izay tsara farafaharatsiny farafaharatsiny, manokana ho an'ny saka sy kittens mampinono ary tsy misy serealy.
Manana alika kely loatra: Indraindray dia mitranga fa ny saka renim-pianakaviana dia manana saka maro kokoa noho izay zakan'ny vatany. Mba hanampiana azy dia tsy maintsy avelanao ho feno foana ny mpamatsy azy ary alao antoka fa misotro rano araka izay tiany izy.
Inona no hatao raha tsy misy ronono ny saka ko?
Fantatrao izao hoe maninona izy no tsy misy ronono, fotoana izao hidirana amin'ny asa fandraharahana ireo zanany. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mandrisika ny famokarana rononofa tsy misy hanina tsara ho an'ny zaza noho ny omen'ny reniny azy. Ho an'ity dia tsy maintsy ataonao izao manaraka izao:
omeo azy sakafo faran'izay tsara kalitao,
asio lamba mando amin'ny rano mafana amin'ny tratrany mba hidina haingana kokoa ny ronono,
ento any amin'ny dokotera izy. Mety hanome soso-kevitra aminao izy hanome anao fanafody hanampy azy amin'ny ronono.
Mandritra izany fotoana izany dia miandry ianao raha manatsara ny toe-javatra na tsia, kittens dia tokony homena ronono fanoloana ho hitanao amidy any amin'ny magazay biby miaraka amin'ny tavoahangy. Safidy iray hafa ny mifangaro:
250ml ronono tsy misy lactose sy tsy ombivavy
Aody atody (tsy misy fotsy)
Siramamy kely (iray izay mety amin'ny tendron'ny antsy, tsy misy intsony)
Tokony hanome azy ireo isaky ny adiny 3 na 4 ianao, amin'ny toerana hitanao amin'ny sary etsy ambany, ary hiantohana fa mafana izy io (manodidina ny 37ºC).
Sasha zanako vavy nisotro ny rononony, tamin'ny 3 septambra 2016.
Fa manantitrantitra aho fa samy mila mandinika ny saka sy ny zanany ianao raha toa ka manampy azy hamokatra ronono ny zavatra ataontsika. Raha hitantsika fa lasa ny herinandro nefa tsy misy lalana, dia hanohy hanome tavoahangy an'ireo kely fotsiny isika.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ny fikarakaran'ny saka izay efa reny ianao eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Fiompiana saka » Tsy manana ronono ho an'ny saka ny saka ko, inona no hataoko?
Maninona ny sakafoko no tsy mampahiratra ny masony
Ahoana no tokony hanasaziana ny saka?